Wholesale log debarker Mugadziri uye Mutengesi | Kusanganisa
Iyo chete yekumisikidza roller uye yakapetwa kaviri ndeye mace mhando izvo zvinoita kuti zvive nyore kubata matanda uye kusimudza iyo debarking kugona. Muchina uyu unotora rotary yekucheka nheyo yeasina-chuck rotary lathe, hydraulic kumanikidza drive kupinda mune izvo zvivakwa, inogona nekukurumidza uye zvinobudirira kubvisa bark uye kupedzisa danda iro rakatenderera basa.
Tine mhando mbiri:
1. kupwanya modhi iyo inogona kupwanya iyo yakabviswa marara kuitira nyore kutakura uye kushandiswa.
2. yakajairika modhi pasina kupwanya
Yedu fekitori zvakare inopa OEM sevhisi, isu tinogona kupa muchina sekuda kwako.
Takatengeswa zvakawandisa zveye debarker uye peeling muchina uye zvine hukama michina mukugadzira veneer. Uye mukati memakore aya ekusimudzira, isu tine vashoma mumiririri munyika dzakasiyana dziri kuita basa rekuparadzira nekutengesa uye rese rekutengesa. Uye ino mumiririri system yakatibatsirawo kuwana zita riri nani mushure mekutengesa sevhisi. Nekuti vamiririri vedu vanokwanisa kuenda kune vatengi saiti uye kugadzirisa matambudziko nekupa kuraira.
Kunyangwe kune iyo nyika dzisina mumiririri, haufanire kunetseka nezve sevhisi. Nekuti isu tine yedu yebasa repamhepo timu iyo inogona kubatsira vatengi kugadzirisa dambudziko kuburikidza nevhidhiyo kufona.
1.After kuhukura peeling aigona kudzivirira peeling banga mu ukanyatsotarisisa peeling danho, kunatsiridza ukanyatsotarisisa mugiredhi
2.Adopts muhombe kutema musimboti asiri chuck muhombe lathe
4.One debarker muchina unogona kupa nemaviri rotary lathe, kunze kwevanhu vashanu kana vatanhatu
5.Hydraulic kudyisa, inogona kumisikidza uye kutenderera diki saizi mbishi danda
6.Makwikwi mutengo uye mhando
Pashure: grinder yebanga
Zvadaro: plywood yekugadzira mutsara